Ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee celceliska celceliska sida istaraatiijiyada ugu fiican ee cusub | vfxAlert official blog
Ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee celceliska celceliska sida istaraatiijiyada ugu fiican ee cusub
«Kakanaanta» xad-dhaafka ah waa dhacdo ku dhacda xulashooyinka ikhtiyaariga ah: fallaaraha kore / hoos halkii Fractals-ka caadiga ah, tilmaamayaasha qaab jaantusyo midab leh calaamado aan la fahmi karin iyo «horumarin» kale ayaan ka caawinayn inay faa'iido helaan. Ganacsatada xirfadleydu waxay ogyihiin in dhammaan aaladaha farsamada ee ugu fiican la hindisay, oo waxaad u baahan tahay oo keliya inaad barato sida saxda ah ee loo isticmaalo. Mid ka mid ah aaladahaan caalamiga ah ee loo adeegsaday labadaba buug gacmeedka iyo ganacsiga otomaatiga ah, oo ay ku jiraan calaamadaha vfxAlert, waa celcelis ahaan celcelis fudud.
Nooca : Isbeddellada
Waqtiga : Mid kasta oo ka mid ah inta u dhexeysa M1-D1. Muddada oo dheereysa, ayaa calaamadda lagu kalsoonaan karaa.
Hantida ganacsiga: Lacag kasta oo lacag ah. Shuruudda ugu weyn waa go'an (2-3 dhibic) faafitaan iyo lacag la'aan qarsoon. Natiijooyinka ugu xasilloon waxay muujinayaan EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD, AUD / USD.
Waqtiga ganacsiga : Dhammaan kulammada ganacsiga ee Forex .
Ikhtiyaarka khidmadda boqolkiiba : Aan ka yarayn 70-75% .Ka dib markii la rakibo celceliska dhaqdhaqaaqa, shaashadda shaqadu waxay qaadaysaa foomka soo socda (midabka midabka waa la beddeli karaa):
Ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee celceliska celcelis ahaan istiraatiijiyadda ugu fiican ee cusub Si loo furo ikhtiyaarka CALL-ka, dhammaan saddexda isbarbardhige waa in loo jiheeyaa xagga sare loona kala qaadaa si hoose illaa kor: “Dheer - dhexdhexaad - gaaban”, ama SMA (8) MASMA (5) –SMA (3). Tani waa waajib in la xaqiijiyo kor u kac. Ikhtiyaarka ayaa furmaya ka dib markii la xiray shumaca ugu horreeya ee ka soo baxa khad buluugga ah ee SMA (3). PUT-option wuxuu ku furmayaa xaaladaha ka soo horjeedka: celceliska dhaqaaqa ayaa isku rogaya kor ilaa hoose iyadoo loo eegayo qorshaha “dhakhso - dhexdhexaad - gaabis ah” (SMA (3) –SMA (5) - SMA (8)) - waxaan suuqa ka galaynaa labaad bar burburka ka dib.
Sidaad arki karto, qorshaha guud ee “baqshadda” ama “marinka” celceliska dhaqdhaqaaqa ayaa la isticmaalaa. Tusaalaha caadiga ah - Bill Williams 'Alligator - wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah: celceliska celceliska wuxuu u janjeedhaa dhanka isbeddelka iyadoo loo eegayo xawaaraha ay ku dheehan tahay (muddada dheer, "gaabiska ah" MA). Isku-xidhka khadadka ee cidhiidhiga cidhiidhiga ah wuxuu muujinayaa dhammaadka isbeddelka iyo bilowga isugeynta.
Xusuusin: In kasta oo xaqiiqda ah in saddexda guurguura ee go'an ay sifeynayaan astaamaha midba midka kale si fiicanna u siinayo dhibco gelitaan la isku halleyn karo oo macquul ah (sida aad ku arki karto fiidiyowgeena!), Istaraatiijiyaddu wali ma waafaqayso mabda'a aasaasiga ah ee falanqaynta farsamada.
Qalabyada isla kooxda, kiiskeenna, aaladaha isbeddellada, xitaa iyagoo leh xaddidaadyo kala duwan, ma noqon karaan qodob go'aaminaya furitaanka boos cusub. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka hesho xaqiijin dheeri ah oscillators, tusaale ahaan, RSI, CCI, Stochastic, ama vfxAlert service service, oo si sax ah u tixgelinaya muuqaalka xaaladaha xad dhaafka / xad dhaafka ah iyo dhaqdhaqaaqa isbeddellada. Waxaad si weyn u hagaajin kartaa natiijada xoqidda haddii aad falanqeyn ku sameyso waqtiyo badan oo isku mar ah. Tusaale ahaan, muddooyinka M5-M15 waxay ku siin karaan calaamado qarsoon oo isbeddel isbeddel ah, kaas oo markaa lagu xaqiijinayo heshiis ku saabsan M1. Waqtiga ugufiican ee ikhtiyaar ikhtiyaari u ah istiraatiijiyaddani waa daqiiqado 5-7, laakiin qiimayaasha kale waa la dooran karaa iyadoo kuxiran firfircoonida hantida. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in xitaa M1-M5 ay jiraan isbeddello deggan oo leh xasillooni deggan, markaa waad kordhin kartaa waqtiga xulashada oo kama lumin kartid kalsoonida calaamadaha. Markaad ka ganacsanayso maalinta gudaheeda, waxaan kugula talineynaa inaad sameyso falanqeyn ballaadhan oo suuqa ah -, sida caadiga ah, waxaa jira xaalado badan oo caadi ah oo ku saabsan hantida iyo waqtiyada kala duwan, kuwaas oo celceliska dhaqaaqu isku mid ka falcelinayo. Muddooyinka wararka aasaasiga ah ee aasaasiga ah waxaa si xoog leh loogu talinayaa ganacsatada binary-ka inay ka boodaan maaddaama oo aan si cad loo fahmin jihada ay si fudud khatar ugu tahay fursadaha la furo. Adigoon ogeyn halka ay suuqu fahmi doonto daqiiqadaha ugu horeeya, way adagtahay in la furo ikhtiyaarka lagama maarmaanka ah. Intaa waxaa dheer, sida caadiga ah xilliyadaas oo kale, dallaaliintu waxay si weyn u kordhiyaan boodboodka ama uma oggolaanayaan inay suuqa soo galaan gabi ahaanba. Laakiin sicir bararka ku jira mudada udhaxeysa xiritaanka Aasiyaanka iyo furitaanka kalfadhiga ganacsiga Yurub, oo loo yaqaan 'burburka flat flat' subaxa iyo waa in laga shaqeeyaa isgoysyada Celceliska Dhaqdhaqaaqa.